पहेंलो जर्सी: खुशीको विश्वव्यापी निशान - BBC News नेपाली
पहेंलो जर्सी: खुशीको विश्वव्यापी निशान
Image caption पेलेजस्ता खेलाडिका कारण छुट्टै उचाइमा पुगेको ब्राजिलियन फुटबल टीममा नेयमार अहिले प्रसिद्ध छन्
विश्वकप फुटबलको दोश्रो चरण नक आउट चरणको पहिलो खेल शनिबार ब्राजील र चिलिबीच हुँदैछ।
शनिबारको यो खेल प्रति फुटबलका लागि पागल देशका रुपमा चिनिएको ब्राजील पुरै उल्टिनेछ।
तर विश्वका कैयौं फुटबल प्रेमीहरु पहेँलो जर्सीमा सजिएका ब्राजिलियनहरुको शाहसी खेलको काल्पनिकीमा छन्।
पहेंलो जर्सी खुशीको विश्वव्यापी निशान बनेको छ।
त्यो पहेंलो वस्त्र जसले फुटबल खेलका महान खेलाडिहरु संझाउँछ र यो सुन्दर खेलको सबभन्दा सुन्दर तरिकाको खेलाइलाई स्मरण गराउँछ।
यो पहेँलो शर्ट जादुमय मोहक र मजा दिने ब्राजिलियन फुटबलको पर्याय बनेको छ।
यसले बीसौं शताब्दीको पछिल्लो भागमा फुटबललाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका पेले, जायरजिन्हो, जिको र सोक्रेटसको योगदान संझाउँछ।
सन १९७० को विश्व कप विजेता टोलीका क्याप्टेन कार्लोस अल्बर्टो भन्छन्, "ब्राजिलियनहरुका लागि पहेँलो जर्सी पवित्र छ। जब हामी पहेलो जर्सी पहिरिन्छौं हामी गौरव महशुस गर्छौं।"
Image caption ब्राजील फुटबलमा पागल देशका रुपमा परिचित छ
उनी भन्छन्, सँगसँगै यसले हामीमा जिम्मेदारी ल्याउँछ त्यस्तो जिम्मेदारी जसले मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ र उत्साहित बनाउँछ।
हरियो किनारा भएको पहेंलो शर्ट। सेतो धर्का भएको निलो कट्टु र सेतो मोजा ।
स्पष्ट र बहुआयामिक रंगहरु जुन कुनै अरु टीमसँग लागि अन्यौल या भ्रममा अल्मलिन्न।
संसारभरका साओ पाउले, स्यान डियागो, स्लाउ, फोर्टजेजा, फ्र्यांकफर्ट या फोर्ट विलियम जताका सडकमा एकछिन हिँडने वित्तिकै कोहि न कोही ब्राजीलको जर्सीमा सजिएकै हुन्छन् ‍र संभवत त्यसको पिठ्यूमा अंकित हुन्छ दश नम्बर।
जुन ब्राजिलियन प्रख्यात खेलाडि पेलेको जर्सी नम्बर थियो।
तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ कसरी ब्राजिलियनहरुले यो पहेँलो वस्त्र धारण गर्न पुगे या कहिले देखि उनीहरु यो लगाउँदैछन्।
सन १९५२ मा उरुग्वेसँग हार्दाको समय ब्राजीलको नयाँ बनेको माराकाना रंगशाला स्तब्ध थियो र मौन पनि।
त्यसबेला खेलाडिहरुले लगाएका निलो कलर भएको सेतो सर्ट, सेतै कट्टु र सेतो मोजा देशभक्तिपूर्ण लागेनन् र शुरु भयो नयाँ जर्सीको खोजी।
जसका लागि आधार बनाइयो ब्राजिलियन झण्डामा रहेका चार रंगलाई।
सन १९५३ मा कोरियो दा मन्हा (Correio da Manha) भन्ने अखबारले नयाँ डिजाइन बनाउन एउटा प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्यो।
त्यसको नियम थियो नयाँ जर्सीमा ब्राजीलको झण्डामा रहेका चार रंगहरु पहेँलो निलो हरियो र सेतो प्रयोग गर्नुपर्छ।
र जितेको डिजाइनको जर्सी सन १९५४मा स्वीट्जरल्याण्डको विश्वकपमा पहिरिइनेछ।
Image caption शनिबार चिलि र ब्राजीलबीच हुने खेलबाट विश्वकपको दोश्रो चरण शुरु हुनेछ
त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका एउटा अखबारका चित्रकार अल्डेयर गारसिया स्ले त्यसबेला १८ वर्षका थिए।
उरुग्वेको सीमा नजिकै रहेको रियो ग्रान्डे डो सुलको सानो शहर पेलोटासस्थित उनको घरबाट उनले ति रंगहरुबाट सय थरी डिजाइन बनाएका थिए।
स्ले भन्छन्,"अन्तिममा मैले महशुस गरे शर्टको रंगचाहिँ पहेलो मात्रै हुनुपर्छ।"
चार सय एक प्रतिस्पर्धीमा उनको डिजाइनको त्यहि साधारणपन र मधुरतामा निर्णायकहरुको आँखा पर्यो।
प्रतिस्पर्धामा दोश्रो भएको डिजाइन पनि साधारण थियो हरियो शर्ट सेतो कट्टु र पहेँलो मोजा।
सन १९५४ मा पहिलोपटक यहि पहेलो जर्सी लगाएर खेल्दा चिलिलाई शुन्यका विरुद्ध एकले ब्राजीलले जित्यो।
त्यसको चार वर्ष पछि स्वेडेनको स्टकहोममा भएको खेलमा ब्राजिलले पहिलो विश्वकप जित्यो तर त्यसबेला प्राविधिक कारणबस प्रतिस्पर्धी स्वीस टीमको पहेलो जर्सीका कारण ब्राजीलले लगाउन पाएन।
सन १९६२ मा पहिलोपटक ब्राजीलले यहि सुनौला पहेंलो जर्सीमा विश्वकप उचाल्यो।
त्यसबेला अखबारको प्रकाशन कालो सेतोमा सीमित थियो।
त्यसैले सन १९७० मा मेक्सिकोमा भएको खेलका बेला टेलिभिजनहरु मार्फत रंगीन दृष्यहरु देखाइँदा विश्वभरका फुटबल प्रशंशकहरुले त्यो पहेलो जर्सीको चमत्कार देख्न पाएका थिए।
पेलेले लगाएको जर्सी सन २००२ मा एक लाख ५८ हजार पाउन्डमा बिक्री भएको थियो।
इटलीले सन १९८२ को विश्वकप त जित्यो तर ब्राजीले सबैको कल्पना कैद गरेको थियो।म बच्चा हुँदादेखि सोच्थें उनीहरुले लगाएको पहेलो शर्ट कस्तो राम्रो र उनीहरु शासै रोकिएला जस्तो कस्तो राम्रो खेल्छन्। त्यहिबेलादेखि म उनीहरुसँग जोडिएको महशुश गर्छु
एलेस्सान्ड्रो डेल पियरो, इटलीको विश्वकप टीम खेलाडी
उनी सहितको असाधारण रुपमा खेलिरहेको टीम सुनौलो घामको छनक दिने जर्सीमा लाखौ लाख मानिसहरुमा खुसी छाउने गरी खेलेको थिए।
कार्लोस एलबर्टो भन्छन्, "मेरो जीवनमा पेले नै सबभन्दा राम्रा खेलाडि हुन्। त्यो नै अहिलेसम्मकै सबभन्दा राम्रो फुटबल टीम हो।"
इटलीका लागि ९१ पटक खेलेका एलेसान्ड्रो डेल पीयरो जसले सन २००६ को विश्वकप जित्ने इटलीको टीमका खेलाडि थिए; भन्छन् : "इटलीले सन १९८२ को विश्वकप त जित्यो तर ब्राजीले सबैको कल्पना कैद गरेको थियो।म बच्चा हुँदादेखि सोच्थें उनीहरुले लगाएको पहेलो शर्ट कस्तो राम्रो र उनीहरु शासै रोकिएला जस्तो कस्तो राम्रो खेल्छन्। त्यहिबेलादेखि म उनीहरुसँग जोडिएको महशुश गर्छु।"
यो धारणा धेरैमा देखिन्छ।
त्यसका डिजाइनर स्ले अहिले कता होलान्?
७९ वर्षीय स्ले आफ्नी श्रीमति मारलीन सहित उही पेलोटास नगरमै बस्छन्।
प्रतिस्पर्धा जितेपछि उनी रियोको उक्त अखबारको कार्यालयमा सरेका थिए।
एक समय उनी ब्राजीलका खेलाडिहरुसँगसँगै रहुन् भन्ने निर्णय गरिएको पनि थियो।
तर एकजना लजालु युवकले खेलाडिहरुको रक्सी र युवतीहरुले माथ गरेको समय पचाउन सकेन। उनी फर्के।
उनले गरेको डिजाइन पैसा उत्पादन गर्ने मेशिनमा परिवर्तित भएपनि उनले आफ्नो जीवन शैली वदलेका छैनन्।
बरु कहिलेकाहिँ म त्यस्तो स्वच्छ चिज अहिले पैसामा परिवर्तित भएको देख्दा आँफुलाई अलिकति दोषी महशुस गर्छु
एल्डेयर गारसिया स्ले, ब्राजीलको जर्सी डिजाइनकर्ता
सन १९९६ मा नाइके कम्पनीले दश करोड पाउण्डको संझौता गर्यो ब्राजीलियन फुटबल कन्फेडेरेशनसँग।
संझौताका बखत त्यो त्यस्ता खाले संझौताको त्यो सबभन्दा ठूलो रकम थियो।
स्ले त्यसमा गौरव गर्छन्?
उनी भन्छन्,"अहँ म गर्दिन सत्य त यो हो त्यो मेरालागि कहिल्यै महत्वपूर्ण भएन। बरु कहिलेकाहिँ म त्यस्तो स्वच्छ चिज अहिले पैसामा परिवर्तित भएको देख्दा आँफुलाई अलिकति दोषी महशुस गर्छु।"
यो सन १९५३ मा गरिएको एउटा जर्सी डिजाइन गर्ने प्रतिस्पर्धामा १८ वर्षे युवा अल्डेयर गारसिया स्लेले दिएको उपहार हो जुन ब्राजीलका जनताले कहिल्यै विर्सनेछैनन्।
त्यहाँ अहिले कैंयौंमा यो विश्वकप प्रति वैराग्य या आक्रोश पनि हुन सक्छ तर ब्राजीलियनहरुमा यो शर्टप्रति आदर छ।
पहेंलो जर्सी नलगाउन्जेल ब्राजिलियनहरु फुटवल जित्न विफल रहे।
सन १९५३ मा यो जर्सी लगाउन शुरु गरे यता उनीहरुले पाँचपटक विश्वकप जितिसकेका छन्। यसपटकको प्रश्न हो के छैटौं पटक उनीहरुले जित्लान्?